TOKO 8: TEXT - Geofumadas
Mahagaga, tsy maintsy ampidirina ny soratra amin'ny sary marika, injeniera na sary mekanika. Raha drafitra an-tanàn-dehibe, ohatra, dia mety mila manampy ny anaran'ny arabe ianao. Ny drafitry ny singa mekanika dia matetika misy fanamarihana ho an'ny atrikasa ary hisy hafa izay, farafaharatsiny, misy ny anaran'ilay sary.
Ao Autocad dia misy zavatra roa samy hafa isika: lahatsoratra amin'ny andalana iray ary lahatsoratra amin'ny andalana maromaro. Ny voalohany dia mety ho misy fanitarana, fa ho lahatsoratra foana amin'ny andalana izany. Ny faharoa, na izany aza, dia mety ho mihoatra ny andalana iray ary ny fetran'ny mizara ny lahatsoratra dia azo apetraka. Mifandimby kosa, ny toetran'ny soratra, toy ny takelaka, ny habeny ary ny toetoetrany hafa, dia mifehy amin'ny alàlan'ny "Styles Text". Andao hojerentsika ireo endri-javatra rehetra ireo.
Next Post 8.1 Text amin'ny tsipikamanaraka »